China 6.35mm 1/4 inch Chrome Steel Bhora G10 Inoshandiswa Mukutakura uye Auto Parts Manufacturer and Supplier |Lixin
1, 250kg / simbi dhiramu kurongedza, 4 madhiramu mune imwe pallet, 78cm * 78cm
2, 10kg/bhokisi, 100boxes mune imwe yemapuranga kesi, 92cm * 73cm * 67cm
3, 5kg/polybag, 90 polybags mune imwe yemapuranga kesi, 60cm * 80cm * 40cm
4, 25kg/katoni, 40-60makatoni/pallet, 92cm*73cm*67cm
Isu tiri nyanzvi kugadzira uye mutengesi.
Mabhora emhando dzakawanda ndizvo zvigadzirwa zvedu zvikuru, zvine mukana mumhando uye mutengo.
Nyika dzese dzakatenderedza pasirese dziri uye dzichava mutengi wedu.
Kukurumidza uye kwakasiyana kutumira kunovimbisa kuti mabhora anosvika kwauri ASAP.
24 maawa sevhisi kubva pakubvunza kusvika mushure mesevhisi iripo.
Zvakapfuura: AISI52100 Bearing Balls DIN5401 High Chrome Steel Ball High Precision G10 G16 G25 Steel Ball Bearings Gcr15 Metal Balls 1.588mm-50mm
Zvinotevera: 3.175mm 1/8 inch SS304 SS316 Stainless Steel Bhora G100 G200 G1000
6.35mm 1/4 Bhora reSimbi
Aisi 52100 Chrome Bhora
AISI52100 Steel Bhora
Gcr15 Simbi Bhora
Grade10 Bhora resimbi
H62 Bhora rendarira, Diki Mhangura Mabhora, Bhora rendarira, H65 Bhora rendarira, Pure Solid Copper Bhora, Bhora resimbi,